U Channel Base Railing waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay nidaamka galaaska noogu fudud ee la rakibo. Nidaamkan waxaa lagu heli karaa 62/67/70.5mm ballac, 102mm oo dherer ah, oo si fiican ugu shaqeeya 12mm ilaa 25.52mm galaas qaro weyn.
Si aad u noqoto mid xiisa leh, oo aragti cusub leh - dooro U Channel Base Glass Railing System.
Nidaamka tareenka saldhigga muraayadda ah wuxuu ka kooban yahay bir dhuuban oo ku dul socota salka hoose, oo kor u haya guddi kasta oo galaas ah.
Dusha sare ee muraayadaha ayaa u dhaqmi kara sida gacan -ku -haynta - sidaa darteed looma baahna in lagu daro biraha ama bir -gacmeed.
Laakiin dabool bir ah oo dhuuban ayaa lagu dari karaa dusha sare ee darfaha, si loo seexdo, muuqaal dhammaystiran.
WAXYAABAHA FINISH QIIMAHA / FAAFINTA
SALKA Kabaha Aluminium -ka oo ku xiran #6 Dheecaan 2.7 "*4" Saldhiga kabaha, 5'-0 "max.OCglass buuxi.
Fascia ama buurta sare
BUUXI Muraayad Cad, Midab leh ama Jilicsan Min.1/2 "galaas dahaarka leh oo leh PVB ama dhex -dhexaadiyaha SGP Dhexroorka muraayadda: 1/2", 5/8 ".
XADKA BADAN U-Cap #6 Dheecaan 1 "Dhererka U-Cap
XADKA GACANTA Bir daxal laheyn #6 Dheecaan ama ECM ø1-1/2 “ama 2”
Looga Baahan yahay Jaranjarooyinka
Ahama Steel w/ LED ø1-1/2 with oo leh 3000K ama 4000K LED, Dhexdhexaad ama Xoojin sare, muraayad cad ama barafaysan
Qoryaha (Red Oak, Cherry ama Maple) Cilmiyaysan ø2 "
Qoryaha (Red Oak, Cherry ama Maple leh LED) "2 "oo leh 3000K ama 4000K LED, Dhex -dhexaad ama Dhex -dhexaad ah, Muraayad Cad ama Barafaysan
Qiimaha nidaamkaaga U -galaaska sagxadda salka ah waxaa lagu go'aamin doonaa cabbirka guud ee taayirrada aad u baahan tahay, iyo sidoo kale xulashooyinka dhammaynta ee aad doorato.
Ka dib marka la oggolaado sawirrada dukaanka, nidaamkaaga sagxadda dhalada ee U -ga ayaa wax -soo -saar ka sameeya warshaddeenna Foshan, Shiinaha. Waxaan leenahay alwaax, biro, iyo tas -hiilaad samaynta dhalooyinka si aan u awoodno inaan soo saarno qayb kasta oo jaranjaradaada ah.
Ujeeddada geedi -socodkeenna been -abuurka ayaa ah in habka rakibidda loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Birta iyo dhalada ayaa la gooyaa dhererka saxda ah ee aad u baahan tahay. Waxaan awoodnaa inaan si sax ah u saxno sababta oo ah waxaan xakameynaa hannaanka injineernimada ee nidaamka oo dhan, waxayna ka dhigaysaa habka rakibidda shaqo isku -dhafan oo fudud.
Hore: Decking ahama Steel Baluster Wire Cable Railing
Xiga: Aluminium Post Handrail Powder dahaarka leh Balustrade System
Aluminium Post Handrail Powder dahaarka Balustrade ...